Ny kinova vaovao an'ny Inkscape 1.2 dia efa navoaka | ubunlog
Taorian'ny taonan'ny fampandrosoana, ny fandefasana ny Ampidino ny dikan-tsarimihetsika vector maimaim-poana Inkscape 1.2, dikan-teny misy fiovana maromaro natao ary misongadina ny zava-dehibe indrindra, ohatra, vokatra vaovao, interface vaovao ary maro hafa.
Ny tonian-dahatsoratra dia manome fitaovana fanaovana sary tsy miovaova ary manome fanohanana amin'ny famakiana sy fitehirizana sary amin'ny endrika SVG, OpenDocument Drawing, DXF, WMF, EMF, sk1, PDF, EPS, PostScript, ary ny endrika PNG.
1 Inkscape 1.2 Fampisehoana vaovao lehibe
2 Ahoana ny fametrahana Inkscape 1.2 amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
Inkscape 1.2 Fampisehoana vaovao lehibe
Amin'ity dikan-teny vaovao ity dia asongadina fa ny fanohanana antontan-taratasy maro pejy, izay ahafahanao mametraka pejy maromaro ao anaty antontan-taratasy iray, manafatra azy ireo avy amin'ny rakitra PDF misy pejy maro, ary mifantina pejy tsirairay rehefa manondrana.
Nohavaozina indray ny fampisehoana ny palette sy ny loko, Ho fanampin'izany, dia nampiana boaty fifanakalozan-dresaka vaovao hanamboarana ny endriky ny tontonana miaraka amin'ny palette, izay ahafahanao manova mavitrika ny habeny, ny isan'ny singa, ny layout ary ny indentations ao amin'ny palette miaraka amin'ny fijerena avy hatrany ny valiny.
Marihina koa fa a vaovao mivantana contour vokany (mosaika) mba hamoronana lamina sy rafitra mosaika, mamela anao handika haingana / handika zavatra marobe na hamorona lamina sy fiovaovana tsy mahazatra avy amin'ny rafitra miverimberina.
Ankoatra izay dia marihina ihany koa fa nampiana izany interface vaovao hifehezana ny fikapohana hamolavola sisintany (Snap to Guides), izay ahafahanao mampifanaraka ny zavatra mivantana amin'ny lamba, manamaivana ny fampiasana fitaovana fampifanarahana sy fametrahana.
Etsy andaniny, manasongadina ihany koa tontonana novolavolaina mba hiasa miaraka amin'ny gradients, ahora el Ny fanaraha-maso ny gradient dia atambatra amin'ny fifanakalozan-kevitra famenoana sy fanaraha-maso tapaka. Nohamafisina ny fanitsiana tsara ny masontsivana gradient. Nanampy lisitr'ireo loko teboka vatofantsika mba hanamora ny fifantenana ny teboka gradient.
Nampiana interface tsara ho an'ny fanovana marika sy ny tsipika.
Ny safidy fampifanarahana sy fizarana rehetra dia nafindra tany amin'ny fifanakalozan-dresaka mahazatra "Ampifanaraho sy zarao".
Nomena fahafahana mampifanaraka ny votoatin'ny fitaovana. Ny fitaovana dia azo atambatra amin'ny alalan'ny fisintonana avy amin'ny sisiny, alahatra ary apetraka amin'ny tsanganana maro.
Fanampiana fanampiny amin'ny fanondranana amin'ny maody batch, ahafahanao mitahiry ny vokatra amin'ny endrika maro indray mandeha, ao anatin'izany ny SVG sy PDF.
Nampiana ny fanohanan'ny Dither hanatsarana ny fanondranana sy ny kalitaon'ny sary miaraka amin'ny paleta voafetra habe (ny loko tsy hita dia averina amin'ny fampifangaroana loko efa misy).
Ny fanitarana Clipart Importer dia natolotra hikaroka sy hisintona votoaty SVG ampiantranoana amin'ny tranokala isan-karazany, ao anatin'izany ny Wikimedia, Open Clipart, ary ny Inkscape Community Collection.
Ny fifanakalozan-dresaka 'Layers' sy 'Objects' dia natambatra.
Farany, raha liana hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao momba ny kinova Inkscape 1.0.2 vaovao dia azonao atao ny manamarina ny antsipiriany Ao amin'ity rohy manaraka ity.
Ahoana ny fametrahana Inkscape 1.2 amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
Ary farany, ho an'ireo izay liana te-hametraka ity kinova vaovao ity ao amin'ny Ubuntu sy ireo rafitra niavian'ny Ubuntu hafa, dia tokony hanokatra fantsona ao amin'ilay rafitra izy ireo, izany dia azo atao miaraka amin'ny fitambarana fototra "Ctrl + Alt + T".
Ary ao aminy hanoratra ity baiko manaraka ity izahay hampiarahanay ny rakitra fitahirizam-boky:
Vitao ity raha hametraka inkscape, mila manoratra fotsiny ny baiko isika:
Fomba iray fametrahana azy koa ny fanampian'ny fonosana flatpak ary ny hany takiana dia ny manana ny fanampiana ampiana amin'ny rafitra.
Ao amin'ny terminal fotsiny dia mila manoratra ity baiko manaraka ity isika:
Ary farany ny iray amin'ireo fomba natolotry ny mpandrindra Inkscape mivantana dia mampiasa fisie AppImage izay azonao sintonina mivantana avy amin'ny tranokalan'ny fampiharana. Amin'ny tranga misy an'ity kinova ity dia afaka manokatra terminal ianao ary ao anatiny no ahafahanao misintona ny endrik'ity kinova farany ity amin'ny fanoratana ity baiko manaraka ity ao aminy:
Vita ny fisintomana, izao dia mila manome alalana ny fisie fotsiny ianao miaraka amin'ireto baiko manaraka ireto:
Ary dia izay, azonao atao ny mihazakazaka ny sarin'ny fampiharana amin'ny alàlan'ny tsindry indroa eo aminy na avy amin'ny terminal miaraka amin'ny baiko:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Software » Navoaka ny kinova Inkscape 1.2 vaovao
Tonga miaraka amin'ny fanohanana ny MacOS, API vaovao, fanatsarana ary maro hafa ny PAPPL 1.2